Ma arrinta haddii Ciise Rose? — TRIP LEE - SITE RASMIGA AH
Waxaan xasuustaa qoyskeyga korayaan tegi lahaa oo dhan maqnaan Easter. lahaa waxaan si suuqa tago toddobaadka ka hor iyo ka qaado sawir la Bakeylaha ah. Waxaan shakhsiyan qabaa in uu yahay creepiest oo dhan mascots fasaxa. bakayle A toosaa? Taas traumatizing carruurta. Ma aha oo kaliya in, laakiin aad ayaa sheegay in uu u socday si ay u muujiyaan ilaa gurigaaga Isbuucii lasoo dhaafay? Anyway on Easter, waxaan aadaa kaniisadda lahaa, ka dibna waxaan guriga ku soo noqon lahaa. Waxaan sameyn lahaa ugaarsi a ukunta Easter. Waxaan ka badan lahaa qoyska. Waxaan Jecelahay dambiilood Easter yar la cayn kasta oo ah alaabtii in ay jiraan.
Oo qaar badan oo naga mid ah waxay leeyihiin sheekooyin la mid ah. My saaxiibo non-Christian xitaa leeyihiin sheekooyin aad u la mid ah. Dhammaan waxyaalahaas noo korayaan dhaqan halkaas oo aanu garan sarakicidda Ciise bartey ka dambaysa Ixtifaalka, laakiin in badan ma ahan runtii lagama maarmaan u dabaal.
Maxaad Dood Tani waa Muhiim ah
Su'aasha aan waydiinaya oo isku dayaya in ay ka jawaabaan maanta waa: Ma macno ah haddii Ciise runtii ka qabriga la kiciyey? Dabcan ma ahan haddii aad doonayaa inaan sameeyo oo dhan waa leeyihiin raadinta ukunta Easter. Taasi ayaa gabi ahaanba waxba u qaban la Ciise. Laakiin dhammaanteen innagoo aan doonayaa in ka badan in ka mid ah nolosha. Waxaan qabaa, waa su'aal aad u khuseyso, oo waxaan u malaynayaa waa muhiim inaad weydiiso a sababo dhowr.
1, Qaar ka mid ah Ma u maleynayo inay abid ka dhaca. Qaar badan oo naga mid ah fiirsan sarakicidda Dad dhintay ka dib in ay wax aan macquul aheyn. Marka Quluubta joojiyo, waxaa jira nolosha dambe la lahaa. HAY'ADAHA ma heli socda mar kale. Waxaan marnaba arkay, waxa uma muuqato in ay ku habboon la sharciyada dabiiciga ah, iyo dad badan oo ay dareemaan kalsooni ku qaba in ma aysan dhicin. Haddaba waa muhiim in aad ka fikirto.
2, Qaar kale oo naga mid ah qabaa waxaa ka mid ah sida ku tacaluqda. Waxaan aadan u malayn in aad u badan oo ku saabsan hab midkood. Waxaa laga yaabaa in uu ku sameeyey, waxaa laga yaabaa in isagu ma uu. Muxuu in ay leeyihiin inay sameeyaan leh noloshayda oo dhan. Malaha waxaan ku bixinayaa doonaa fiiro gaar ah u Ciise barta qaar ka mid ah ka dib on noloshayda, laakiin waayo, hadda waan wanaagsan ahay. Waxaan haysta madadaalo, inaan anigu waxaan loo bandhigi waxyaalo cusub, Ayaan ku baranayaa, Waxaan isku dayayaa in la dhiso aasaas ama xirfado. ma Waxaan aad uga walwalsanahay sarakicidda kuwii hadda ahay. Laakiin sarakicidda ma aha tacaluqda waayo qof. Oo anigu waxaan doonayaa inaan cadeeyo in inta lagu jiro our dood maanta.
3, Qaar ka mid ah oo naga mid ah u malaynayaa in sheekada sarakicidda sida kaliya adkaa. Waa calaamad u ah anigoo goor kor ku xaaladahaaga. Waa sheeko qurux badan in la qabtay maskaxda dadka iyo qalbigooda ka badan la soo dhaafay ka 2000 sano. Waxaa laga yaabaa in ay jiraan moral ah in sheekada, laakiin wax ka badan in.
Sababta Waxaan qabaa tani waa muhiim in laga hadlo sababtoo ah waa dhan seddex ka mid ah aragtiyaha kuwa ka duwan waxa Kitaabka Quduuska ah barayaa ku saabsan sarakicidda Ciise waa. Sidaas darteed haddii aad u badan oo naga mid ah u malaynayaa in waxyaabo kala duwan oo ku saabsan sarakicidda kuwii ka badan Kitaabka Quduuska ah ma aan weydiin waa nafteena in ama aan in arrimaha. xilli Easter waa fursad weyn u leedahay doodan.
Haddii tani ay tahay sida aynu u aragno sarakicidda markaas jawaabta waa ma, waxa macno ah ma. Laakiin haddii aadan hore u qiyaasay, Waxaan ahay Christian ah, waxaana qabaa Ciise dhab kacay baxay qabriga. Iyagoo keliya ma aha ayaan u qabaa inay muhim, Waxaan qabaa inaan joogno oo dhan rajo la'aan, iyada oo.
Maxaan uga fekerayaa wuxuu u kiciyey
Waxaan doonayaa in aan si kooban kuu sheegi sababta aan rumaysanahay in Ciise dhintay ka soo sara kiciyey. Ma doonayo inaan in ay qaataan ton waqti on kuwan, maxaa yeelay, ma ahan ujeeddada hadalka this. caawa Ujeedada waa in ay ka hadlaan in ama aan u muhiim, laakiin haddii aan doonayaa inaan ku adkaysanayaan in uu si dhab ah u kacay oo waxaan ka dhigi sheegashada ku salaysan in, Waxaan rabnaa in aad ogaato sababaha aan rumaysanahay.
1. Kitaabka Quduuska ah waxaa ku Daaweysey ayaa sida dhacdo Historical
Marka aad akhrin Kitaabka, Rasuulladu ma daweeyo sarakicidda sida wax ka yar xaqiiqda. Waa ay iska cadahay in aanay isu arkaan inay qoraal sheekooyin. Marka Rasuulladu ku wacdiyo wacdiyada ka dib markii Ciise kori Samada, waxay ka hadlaan waxa dhimashada Ciise (oo aqbalay) iyo ka soo sarakicidda Ciise xoog la mid ah. Sida haddii labada waa xaqiiqooyin.
Kitaabka waxaa cad in Ciise macno kacay kuwii dhintay ka soo. Oo anna waxaan rumaysan Kitaabka inay noqon erayga Ilaah. Waxaan rumaysanahay in la aamini karo. Uma maleynayo waa been ama waa qaldo. Oo jidkii ayay ku qoran tahay ma aha sida aad u qori lahayd haddii aad u kooban. Waa kuwee ii keena sababta labaad Waxaan aaminsanahay sarakicidda kuwii dhacay.
2. Waxaan aamin maragga lagu kalsoon yahay
All oo naga mid ah ay aqbalaan wax ku salaysan maragga ka dadka kale. Ma joogay ciyaarta basketball ee, laakiin waxaan ku kalsoon announcers isboortiga ama saaxiibo ahaa oo waxaa aynnu. Waxaad uma baahna caddayn jirka. Waxaad iyaga ku kalsoon tahay. Waxaan seegay fasalka, laakiin waxaan ku kalsoonahay fasalka noqotay on qoraalada ay. Ma ahaayeen cinwaanka Gettysburg ku, ma waxaan ku footage kasta, laakiin waxaan ku kalsoonahay in ay dhacday. Waxaannu isku hallaynaynaa in erayadaas waa kuwa ka mid ah Abraham Lincoln.
Anigu hadda waan ogahay waxyaalahan waa ka duwan yahay sarakicidda, laakiin waxaan idinku leeyahay, in la yidhaahdo, waxaa jira dhacdooyin in aan rumaysnayn dhacay, maxaa yeelay, annagu waxaan ku maqalnay oo ku saabsan ka il lagu kalsoonaan karo. Waa wax dabiici ah oo macquul ah in la sameeyo haddii ay jirto ma jirto sabab ay u qanci waayaan.
Dadka la hadal oo ku saabsan sarakicidda ee Kitaabka Quduuska ah, waa sida hadda sida aan u sheegi kartaa, markhaatiyada lagu kalsoonaan karo. Ma jirto sabab aan u iyaga ku qanci waayaan. Dhab ahaan, waxaa jiray boqolaal markhaatiyaal indhaha ku arkay kuwa Ciise arkay. Anigu ma aan ka fikiri kartaa maxkamadda kasta oo ay tahay 500 markhaatiyaal ma noqon doono ku filan si ay u caddeeyaan kiis. Waxaan aaminsanahay in maragga waa daad iyo in Ciise waa dhintay ka soo sara kacay.
3. Waa Fasiraadda u Fiican of Xaqiiqada ah
Bilawga Masiixiga ah waa mid aad u xiiso badan. Waxaad nin Yuhuudda ku dhashay Galili, baraya oo leh nooc cusub oo xujo. Sameynta mucjisooyinka. Soo ururinta dadka taabacsan. Helitaanka in dhibaato la masuuliyiinta Yuhuudda. In tagay by saaxiibbadiis. In la dilay. Oo markaas waa inuu xabaashii lagu helo inuu madhan.
Markaasaa bartey ninkan, kuwaas oo uu sheegay in uu samayn lahaa xeerka la yaab leh wanaag, boqor noqday, dhiska macbudka saddex days- inkastoo uu ku dhintay noqdo isha of dhaqdhaqaaq. Xertii waxay ku yidhaahdeen tagay. Waxay ka cabsadeen iyo niyad sababta oo ah waxay u muuqatay wayna raaceen in aan micne lahayn. Laakiin markaas marka aan akhriyo kitaabka Falimaha Rasuullada, waxaan aragnaa in ay tahay oo dhan lama filaan ah lagu dhiirigelinayaa oo geesi. Oo doonaya in ay la kulmaan cadaadis, waayo, Ciise.
Waxay ku bari in uu Ilaah, dhaqan Yuhuudda, kuwaas oo ay aqoonsan tahay in Ilaah yahay mid keliya. Waxay ku bari in uu ka qabriga kacay, oo ay ugu dhakhsaha badan u baro kadib markii ay dhacdo. Sidaas daraaddeed baa dadkii weli ku dhawaad. Haddii ma aysan dhicin, Taas waa in la xannibnaan lahaa. Mas'uuliyiinta ayaa laga yaabaa in ay xaaladda oo dhan hoos u xidhay, taas oo ahayd khatar ku ah iyaga, by kaliya muujinaya dad jidhkiisa. Dhaqdhaqaaqa koraa, iyo kuwa raacsan Ciise waa badan. Kumanaan aad ugu dhakhsaha badan ka dib. Dhamaan laakiin mid ka mid ah kuwa laba iyo tobankii xertiisa, dhamaado ilaa la dilay ay rumaysadka Masiixa. Dilay ninkan. Waxay ahaayeen sidaas darteed hubi in, iyo ka go'an in ay xaqiiqda ah in uu ahaa Wiilkii Ilaah, dhintay in ay ku dhinteen, waxaa ka soo sara kacay.
Sidee baad u sharax in? Waxaan qabaa Fasiraadda u Fiican xaqiiqooyinka kuwa, waa in uu si dhab ah sameeyey kaca ka qabriga. Waan ogahay anigu ma dhiman doono halyeey aan sameeyey. Waxa kaliya in dadka oo dhan, kuwaas oo ka dhaadhiciyo yaabaa, waa in uu si dhab ah u kacay.
Sidaas daraaddeed in maanka, Waxaan doonayaa in ay ka hadlaan iyada oo qaar ka mid ah saamaynta sarakicidda.
Sidaas inta ka dhiman waqtiga, waxaan ka hadli doonaa su'aasha ku saabsan in ka dibna. Ma dhib haddii Ciise xabaasha laga sara kiciyey,. Waxaan doonayaa inaan kuu sheego sababta Waxaan qabaa inay muhim. Waxaan doonayaa inaan ku sameeyaa eegaya maris ah Kitaabka Quduuska ah ka, 1 Corinthians 15. Oo maris in, Waxaan doonayaa inaan idin tusin saddex saamaynta sarakicidda.
In 1 Corinthians 15, Paul daaweysey sarakicidda ma aha oo kaliya sida xaqiiqda taariikheed, laakiin sida haddii ay ay saamaynta waa u nolol iyo geeri.
Kuwani saddex sababood oo ay yihiin kuwo aad muhiim u ah hal kasta oo naga mid ah qolka this. Waxay muhiim u ah qof kasta oo nool yihiin. Oo waxaad arki doonaa sababta aan u aaminsanahay in daqiiqad. Halkan waxa Paul ayaa sheegay in:
Laakiin haddii ay jiraan sarakicidda kuwii dhintay ma jirto, ka dibna aan xitaa Masiixana lama sara kicin. Oo haddii aan Masiixa la sara kicin, markaas wacdigayagu waa khasaare, rumaysadkiinnuna waa waxtarla'aan. Waxaan xitaa waxaa la helay in la Ilaah been, maxaa yeelay, waxaannu u marag Ilaah inuu Masiixa sara kiciyey,, kan aanu sara kicin haddii ay run tahay in kuwii dhintay la sara kicin. Haddii aan kuwii dhintay la sara kicin, xitaa ma Masiixana lama sara kicin. Oo haddii aan Masiixa la sara kicin, rumaysadkiinnu waa khasaare, oo weli dembiyadiinna ayaad ku jirtaan aad. Markaas ayaa sidoo kale kuwa Masiixa rumaysnaa oo dhintayna, way halligmeen. Haddii in Masiix ku rajayn lahayn noloshan oo keliya, Annagu waxaannu nahay dadka oo dhan ugu u naxaan.
waxaan. Haddii Ciise aanu sara kicin, ma jiraan wax News Good
Maxaan ula jeednaa in? Dabcan waxaa jira aan wax mararka qaarkood halkan in warka ah in ay yihiin wanaagsan. Laakiin waxaan ula jeedaa war wanaagsan kama dambaysta ah, waxa Kitaabka Quduuska ah oo ku baaqay in Injiil. Runta waxa ay tahay, inkasta oo ay jiraan qaar ka mid ah wax wanaagsan in ay ka dhacaan news iyo nolosheena, xataa wax inoo siin karaa muddo gaaban rajaynayaa, mid ka mid ahaa kuwa waxyaalahaas inoo siin karaa rajo ka waarta.
jeeg canshuur celinta A ma inoo siin karaa rajo waarta. Aqbalaada barnaamijka qalin ah ma siin karaan ys rajo waarta. hawlgelinta An ama guurka, ma naga siin kartaa rajada waarta. All of waxyaalahanu ay dhowaan doonaan in la joojiyo. Oo iyaga waxaa Nalaga Dafi kartaa naga daqiiqad. Ma jiraan wax rajo ah in socdaa? Ma jiraan wax rajo ah in ay universal iyo grand?
Kitaabka Quduuska ah waa mid aad u macquul ah oo daacad ah oo ku saabsan gobolka of our dunida. Waxaan jebisay, dunida waa la dumiyey, iyo dhammaan uunka oo loo baahan yahay in dib loo soo celiyo. Waxa aynu ognahay in dunida jabna. From masiibooyinka dabiiciga ah si ay cudurka. Oo dembiga. Waxa ay u muuqataa sida ay jiraan tiro cusub oo maalin kasta toogtay hadda. Maxaa socda? brokenness.
Waxa aan kaliya waxaa kastoo. Waxaan sidoo kale waa jajaban yihiin. Caddeymaha ay of this nolosheena waa dembiyadeenna, welwelidda our, xiriirka naga jabi, khilaaf la mid kale, iyo ugu xumaa ee dhan, our separation ka timaada Ilaaha.
Waligaa fikiray sababta aan nahay habka aan u nahay? Waa maxay sababta wax dhib ah maleh sida adag aan isku dayno aan ma noqon karo kaamil ah? Waa maxay sababta aan sameeyo waxyaabaha aynu samaynayno? Waa maxay sababta aan sii ay dib ugu noqonayaan wax dhawra noo dhaawicid? Waa maxay sababta aan go'aanno burbur? Waa maxay sababta aan yeelin kuwa kale? Waxaan jebisay. Taasi waa warka xun.
Ciise waa kan kii Ilaah soo diray si loo soo celiyo, iyo gaar ahaan in ay na soo celi si aannu wax abuura. Taasi waa warka Good.
dhabta ah News
Shaki kuma jiro in Masiixiyaddu waa ka mid ah diimaha dunida ee u gaarka ah. Mid ka mid ah wax gaar ah oo ku saabsan diinta kiristaanka waa in uu ku salaysan dhacdooyinka taariikhiga ah oo si gooni ah. Waxaa jira waxyaabo qaar ka mid ah in dhab ahaan u dhacay in aanu ku kalsoonahay in. Waxaannu isku hallaynaynaa nin dhabta ah, kuwaas oo ahaa run ahaantii dilay, iyo kuwaas oo run ahaantii dhintay ka soo sara kiciyey. Oo haddii waxyaalihii ay run ahayn, markaas injiilka ku saabsan Badbaadiye oo aan run ahayn.
Muhammad Nebi in diinta Islaamka, waa dhintay. Muslimiinta la ogaado meesha uu jirka iyo qabrigiisa waa. Oo tanu waxay gudaheedana sinaba uma ay wiiqayaan iimaan Muslim ee.
Buddha waxaa tabarrucdo uu dhintay ka dib, oo waxaa jira Mala'igtu gubista in loo qaybiyey qoysaska kala duwan. Sidaas awgeed, waxaan ogahay meesha meydka Buddha waa. Oo in gudaheedana sinaba uma ay wiiqayaan iimaanka Buddhist ee.
Confucius 'jirka waxaa lagu aasay uu ku dhashay ee Shiinaha. Isla ayaa laga odhan kari Joseph Smith, kala duwan ee Pope, iwm. Oo xaqiiqda ah in dadkan ay dhinteen oo gudaheedana sinaba uma ay wiiqayaan iimaanka kuwa raacsan ay.
Laakiin haddii uu qof ahayd in la helo dhintay meydkiis Ciise, Masiixiyada joogsanayo si uu u jiro. kaniisadaha Christian waa macno darro ah. daaciyiinta Masiixiyiinta ah waa beenaalayaal. Oo kuwa raacsan Masiixa tahay rajo la'aan. Dabcan haddii dhintay meydkiis Ciise jirey in la helay, masuuliyiinta ayaa kaliya waxa ay tuseen in ay dadka si ay ergeyga faafidda kaliyeeli diinta ninkii. Laakiin barta aan qaadashada waa in ay arrimaha.
Wax walba ha ka yaabin
Dhegayso waxa Paul halkan ku sheegay 1 Corinthians 15. Horaantii uu tilmaamay in Injiil ama News Good sida waxa ugu muhiimsan. Waxa uu sheegay in waxa uu wacdiyaa,, Oo intay qaadanayeen, oo ay haatan taagan ee. Laakiin maqal waxa uu sheegay in aayadda 14.
"Oo haddii aan Masiixa la sara kicin, markaas wacdigayagu waa khasaare, rumaysadkiinnuna waa waxtarla'aan. Waxaan xitaa waxaa la helay in la Ilaah been, maxaa yeelay, waxaannu u marag Ilaah inuu Masiixa sara kiciyey. "
Paul ma qabaa ma Sarakicidda waa qaar ka mid ah sheekada adkaa. Wuxu qabaa, iimaanka ku taagnaa waxay ku. Sidaas daraaddeed markii aannu is daweeyo sida qaar ka mid ah sheekada adkaa, waxaan sidoo joojin laga yaabaa in taasi iska Masiixiyada. Waxaan sidoo kale aan xitaa laga yaabaa in la isticmaalo Kitaabka Quduuska ah, waayo,. Taasi ma ahayn waxa Paul loogu tala galay ama loogu tala galay. Waxaa kale oo xadgudub ah text Xurmaysan loo daaweeyo jidkaas.
Iimaanku Christian wuxuu ku salaysan yahay News. Waxaa ku salaysan dhawaaqidda of news ku saabsan nolosha, dhimashada, iyo sarakicidda kuwii Masiixa.
Haddii taasi run ma ahan, markaas Paul ee wacdigayagu waa khasaare ku. Ma aha oo kaliya in, laakiin Christian ayaa rumaysadkiinnu waa khasaare ku. Maxaan rumeeyaan, haddii sheekada Ciise uusan haysan dhamaad wanaagsan? Waxaa jira war xun oo kaliya. Waxaan ahay mid dembi leh, Ciise isku dayay in uu wax ka qaban in, laakiin dhimasho dhamaadka isaga ka helay
Sidaas darteed haddii isagu ma uu kicin, ma jiraan wax News Good.
Laakiin tan iyo markii uu sara, waxaa jira injiilka
Waxaa jira injiilka! Warka waa run. Waxaan la soo celin karin inuu Ilaah. Waxaan doonayaa in aan aad ka akhriyi aayaadka yar ee ugu horeeya 1 Corinthians 15.
Haatan waxaan idin xusuusin lahaa, walaalo, injiilka aan idinku wacdiyey, oo aad si, taas oo aad heshay, taas oo aad ku taagan tahay, iyo by kaas oo aad la badbaadiyey, haddii aad u xajinno uu eraygii aan idinku wacdiyey, haddaydnan in aad rumeysan yahay in si been ah. Waayo, waxaan idiin dhiibay sida muhiimada ugu horeysa waxa kale oo aan ka helay: waxa weeye, Masiixu u dhintay dembiyadeenna sida waafaqsan Qorniinka, waa la aasay isaga, in uu la sara kiciyey oo maalinta saddexaad la raacayo Qorniinka, iyo in qayuu Keeyfas u muuqday, laba iyo toban ka dibna u. Markaasuu in ka badan shan boqol oo walaalo muuqday hal mar, kuwaas oo intooda badan ay wali nool yihiin, inkastoo qaar ka mid ah ayaa hurdo dhacay. Markaasuu Yacquub u muuqday, markaas rasuullada oo dhan. Kulligood, sida in mid ka mid dhicis dhashay, waxa uu sidoo kale ii muuqday.
Ciise wuxuu u dhintay dembiyadeenna. Markaasuu kacay, dembiyadayada. Taasi waa qayb ka mid ah sheekada Injiil. Taasi news weyn u dembilayaal.
Xaqiiqada ah in Ciise kuwii dhintay ka soo sara kacay Xaqiijiyay In wax kasta oo uu sheegay in ku saabsan Ilaah iyo isaga qudhiisa ku saabsanaa. Taasi waxa ay stamps uu fariin. Taasi waa sheegashada in jirin hogaamiye kale oo iimaanka kasta ama ka dhigi lahaa karaa.
Waxaad arki in warkan waa muhiim ayuu u Paul in uu sheegay in haddii xitaa qayb ka mid ah ma ahan mid run ah, ka dibna uu wacdigayagu waa khasaare ku. Ka fikir kiniisadda aad tagto on Sunday. Haddii sarakicidda ma ahaa run in uu saameyn ku lahaa ay ku wacdiyaya oo dhan? Ha xitaa waxaad maqli ku saabsan dhimashada iyo sarakicidda Masiix iyo sida ay khusaysaa nolosheena?
sarakicidda Tani khuseeya noloshaada. Waxaa muhiim kuu ah, maxaa yeelay, naftii waa ku adag tahay. Dembiyadoodu waa dhab. Bukaanka waa dhab. Dhimashadu waa dhab. Ma jiraan war wanaagsan noo? Yaa ku guuleystay in dhamaadka? Waxaa jira war wanaagsan. Ciise kuwii dhintay ka soo sara kacay. Oo isna wuxuu ku socday inuu waxyaalahan oo dhan ka dhigi cusub. xabaashii The madhan cadeyneysaa in ballamo waa run.
Aan sii wado in ay ka hadlaan saamaynta ay
II. Haddii Masiix aanu sara kicin kuwii dhintay ka soo, ma jiro dembi dhaaf
Waxaan doonayaa inaan akhriyey qaar ka mid ah lyrics random ku saabsan dambi dhaaf.
"Rabbi cafi, wuxuu iyagii ka helay ciidamada mugdiga ah isaga in / laakiin sidoo kale uu sabab xaq ah ku dembaabeen. "
"Rabbi fadlan iga cafi, waayo, sinnin '/ waxaan aan ku yidhaahdeen inaan dhammeeyayna ahay / Laakiin waxaan ku tukanayeen ka hor / Sababta jidka iyada indhaha jaleecada sida ay ciyaaro surwaal aan."
J. Cole, Diirran Up The
"Waan ku baryayaaye, aan waa cafiyan / go'aan kasta oo xun aan u sameeyey / walaashiis kasta oo aan ciyaarin / aawadeed ayaan weli khayaano ilaa maantadan la joogo ahay / Oo waa qalad ay cidina masuul inaan sameeyay go'aano aan sameeyey / Tanu waa nolosha aan doortay, ama halkii, nolosha ii doortay "
Jay-Z, December 4-teedii
"Waxaan isku dayaa in aan iska kala duwan ahay laakiin ugu dambeyntii waxaan isku dhan / waxaan ka baryaynaa in ilaah, Dambi Dhaaf Aabahay **** n waxaan ahay isbedel marnaba qeybiso ah. "
"Waxaan ahay mid dembi leh, kuwaas oo mar kale laga yaabaa in dembiga qeybiso / Eebahaa ee ii Dambi Dhaaf, Rabbigu wuxuu ii dambi dhaaf / waayo, wax aanan fahmin. "
Qof kasta oo la qiimeeyo dhaaf. Xitaa guys kuwa cad in aanay ku talo on dhab beddelo. Qof kasta oo doonayo in uu la cafiyi.
Our Need for dambi dhaaf
Ma jiraan wax qofka halkan qofka kaamil ah. All oo naga mid ah waa xasilooneyn oo aan dembaabo,. Dembigu ma aha sida eray caan ah. Waxaan mararka qaar door bidaan erayo jilicsan sida ayna duleella, ama qaladaadkeyga, ama qalad, laakiinse erayga "dembiga" xidhiidhaa wax ka badan oo gaar ah ka badan kuwa kale loo dhigo. Marka Kitaabka Quduuska ah wuxuu ka hadlayaa dembiga waxay ka dhigan tahay Caasiyo alle la tallaabooyinka aad, erayadaada, ama fikirkaaga. Waxaa ka maqan sumadda, dhacaya gaaban waxa Ilaah wuxuu u baahan yahay, dooneysa ganaya qaldan, rebelling ka gees ah Ilaah.
Oo Kitaabka Quduuska ah ayaa sheegay in dembiyadii ma aha kuwa xaqa xeerarka jabay random, laakiinse waa dembiga waa caasinnimada si toos ah loogu talagalay, Ilaah qudhiisu. Ilaah ee dembiga shakhsi, sida weerar shakhsi isaga iyo wanaaggiisa on, xigmad, iyo ammaan. In si la mid ah oo aad qaadi lahaa qof hoos gubanaya gurigaaga, ma aha oo kaliya sida weerar lagu qaaday gurigaaga, laakiin adigu aad ku, Ilaah qaadataa caasinnimada kasta by abuurkiisa sida weerar isaga. Ma jiraan wax uusan leedahay ay. Dembigu waa dembi ka gees ah Ilaah wanaagsan. Oo Ilaah in la mid ah waana caadil ah oo aan is-hor taagi doonaa.
Halkan aan su'aal aad u: Ha filan in aad la cafiyi dembiyo kuwa? maxaad? Maxaad garsoore wanaagsan abid ha lahaa dembilayaasha off jillaab ee sida foosha xun dembi sida dembigu? Well sida kaliya in Ilaah u dambi dhaafi dembigu waa haddii uu hore u la bixiyo. Oo waxaa jira mid weligiisba uu sheegtay inuu bixiyo dembiga kaliya, Ciise. Oo sarakicidda Ciise waa cadeyn in lacag in la aqbalay.
Dembiyadiinna ayaad ku
Mid ka mid ah waxyaalaha Paul sheegaye ku saabsan haddii Ciise ayaa la sara kicin waa: "Your rumaysadkiinnu waa khasaare, oo weli aad dembiyadiinna ayaad ku jirtaan."
Waxa ay ka dhigantahay in uu noqdo dembiyadiinna ayaad ku, waa in aad u leeyihiin in ay lacag bixiyaan,. Waxaa loola jeedaa in ay wali tahay on diiwaanka. Waxaa loola jeedaa weli aad u addoonsamaan iyaga. Waxaa loola jeedaa ku aadan la samatabbixiyo kuwa ka. Waxaa loola jeedaa in aad looma cafiyi doono iyaga, waayo,. cafiska dembiyada ku taagnaa sarakicidda suugaan jirka Ciise Masiix.
cross waa meeshii Ciise ku guulaystay in ka badan dembiga. Taasi waa sida ciyaarta legdinta dembiga iyo sharka. Oo haddii Ciise kuma kac, in ka dhigan tahay dembi won.
diimaha kale ha sameeyo waxyaalo badan oo la cafiska dembiyada. Ma jiro sharaxaad waayo, bal maxaad garsoore wanaagsan iyaga iska eafiya iskana lahaa. Helitaanka Samada sameynayo more wanaagsan ka badan xun, laakiin waxa ku saabsan kuwii xumaana? Annaga midkayana ku amaanayaa lahaa garsoore kaasoo ha gacankudhiiglayaasha off jillaab sababtoo ah waxay ka caawiyay marwada duq ah wadada maalinta ku xigta. Dembigu wuxuu leeyahay in la bixiyo.
Idinkuna ma waxaad doonaysaan in ay Ilaah hortiisa taagan, Dembiyadiinna. Waxaa jira laba meelood oo aad noqon kartaa, in Masiixa ama in aad dembi.
Oo haddii Ciise aanu sara kicin, ma jiro dembi dhaaf.
Laakiin tan iyo markii uu sara, waxaa jira dembidhaaf!
Ciise ayaa u badan oo noocyada diinta waalan maxaa yeelay,, ma aha oo kaliya waxaa uu ku bogsiinaya dadka, laakiin uu u sheegaya Dambigooda Dartiis cafiyan yihiin. Ciise waxa uu amar uu dembiyada ku cafiyo. baadari ayaa awood uma laha in, wadaadada aadan haysan amar in, wadaaddada aan haysan in authority- Ilaah keliya. Markaasaa Ciise wuxuu ahaa Ilaah xagga jidhka.
Aynu dareen dambi dhaaf erayga dhigi. Waxaad dhahdaa saaxiibkay ii dharbaaxo wajiga. Waa dambi dhaaf ma noqon doono haddii aan yiri waa ok, laakiin la qorsheeyay in ay dib u yeelay ka dib dharbaaxa. Dambi dhaaf ma ahan oo keliya macnaheedu ma aan aqbali uu raaligelin, waxaa loola jeedaa waxaan isaga daweeyo sida lahaa haddii uusan igu dembaabay. Haddaba si aan la isku buuqsan oo duck mar kasta oo uu aado, waayo, shan sare. Waxaan laga yaabaa in aanay isku mid isaga ku kalsoon tahay, laakiinse anigu uma aan qaban doona dembiga in isaga ka gees ah. Anigu ma isku dayi doonaa in ay dib u helaan isaga at, ama noqon qadhaadh xaggiisa. Our xiriir la soo celin karin.
Dembigu waa dembi halis ah ka gees ah Ilaah. Waa mid khatar ah isaga si, in uu kaliya ma ahan waxa ay iska eafiya iskana lahaa. Wuxuu ogaa oo waxay lahayd in la ciqaabo. Oo Ilaah sidaa inoo jeclaaday wax badan in uu Ciise u soo diray. Markaasaa Ciise ina jeclaa wax badan in uu diyaar u yahay inuu qaado cadaabka in iskutallaabta noo ahayd. Taasi waxa ay iskutallaabta yahay. Waa Ciise in la labanlaabo iyo qaadashada Cadaab in dembilayaasha u qalmaan.
Waa sida aan ahay ee qolka iyo waxaan si cad eed ahay, laakiin halkii ay ka la ciqaabo qof qaadataa ciqaabta in ii.
The Faa'iidooyinka dambi dhaaf
Marka aan isku halleeyo Masiixa Ilaah soo celiyo xiriirka uu nala. Waxa uu u tirtiri doonaa our record nadiif ah. Waa go'aan aan eed ka dhigay xaakinka kuwa caalamka oo dhan. Waxa uu na aqbali doonaa galay xiriirka isaga la. Waxa uu dembiyadeenna aamusi maayo inaga gees ah.
Romans 4:7-8 ayaa sheegay in, "Waxaa barakaysan kuwa camal sharcilaawayaasha la cafiyey, Oo dembiyadooda la daboolay; Waxaa barakaysan ninkii kan Rabbiga ma tirin doonaa inuu dembigiisa. "
Waxaa jira wax innaba mar dambe cabsi in dhammaan Caalamka ka badan Ilaah hortiisa in dembiyadiinna ayaad ku taagan. Laakiin waxaa jira barako weyn ee caalamka oo dhan, ka badan in loo cafiyi by Ilaah.
Inta badan, Masiixiyiinta ah waxay leeyihiin sumcad dadka kale ee iyagoo is xaqa ah. Oo waxaan u malaynayaa in ay naxdin leh. Maxaa yeelay, qeexidda halleeya Masiixa yahay mid kasoo horjeeda saxda ah ee xaqnimada is. Waxaa uu sheegay in aan xaqnimada ma. Markaasuu wuxuu u yimid Ilaah iimaanka, inuu noo dhaafo lahaa of our xaqdarrada. Sidaas darteed haddii Nasaarada ayaa iimaanka inaad been, ahaado mid raxmad badan iyaga la. Taasi ma ahayn waxa Masiixa baray
Ma muddo dheer si loo cafiyi dambiyadiinna? Waxaan doonayaa in aad ka fekerto in aad noloshaada. Waxaa jira waxyaabo badan oo aan sameynay oo aan xaq u. Waxaan ku been abuurtay, oo aan u damacsanaayeen. In badan oo naga mid ah ayaa fornicated oo helay cabbay. Dad badan oo inaga mid ah ayaa la xaday iyo khiyaameeyay. Qaar badan oo naga mid ah way neceb yihiin kuwa kale, nahay caajis, iyo liiska tegi karin on. All oo naga mid ah. nolosha Our xumeeya Ilaah quduus ah. Oo anigu waxaan la yaabanahay haddii aad muddo dheer si loo cafiyi dembiyo kuwa.
Injiilka waa, dhaaf la heli karo in Ciise Masiix. Laakiin keliya haddii uu dhab kacay kuwii dhintay ka soo. Oo kaliya, haddii aanu aaminsan nahay in nolosha, dhimashada, iyo sarakicidda Ciise.
Aynu ka fiirsan ku tusinaysaa final
III. Haddii Masiix aanu sara kicin, ma jirto nolosha weligeed ah
Mid kasta oo inaga mid ah hal og yahay in ay jiraan wax aan sax ah oo ku saabsan dhimashada. Marka aan u tag duugta, waxaa jira marna piñatas iyo confetti. Waxaa la murugaysan. Waxaa jira ilmada. inta badan jira farxad iyo sidoo u dabaal noloshooda. Laakiin marka aan ka fekero dhimashada laftiisa, waxaa jira wax badan oo murugo ku lug. Maxaa yeelay, dhimashada waa khalad. Waa adaanaha.
Waxaan nahay si used in la dilo, in waxa ay u muuqataa sidii mid keliya kuwa xaqiiqooyinka waxaan leenahay in la qaban. Laakiin tani sidoo kale waa wax dhacay ka dib markii dembiga dunida ugu soo galay. Dhimashada dhacaya sababtoo ah waxaan dembilayaasha tahay. Ma xaq. Oo haddii aan nahay daqiiqad ka mid ah kuwo Quusan qoto dheer, midkayana ee dhimasho u xiisooda. Waxaan rabnaa in aan ku noolaado.
Ma u malaynaysaa in aad ku socoto in Jannada markaad dhimato? Qaar badan oo naga mid ah u malaynayaa in jannada sida meel fiican, halkaas oo qaraabo mari marka nolosha in ka badan yahay. Oo waxaannu kinda rajeynayaa aynu halkaa gaadhno. Oo in qabanayaa, in ka dib markii aan ku dhiman, in aan dhamaadka. Well Paul ayaa sheegay in, haddii ay jirto Sarakicidda kuwii dhintay ma, markaas waxba kuma jiraan.
"Markaasaa kuwii Masiixa rumaysnaa oo dhintayna, way halligmeen. Haddii in Masiix ku rajayn lahayn noloshan oo keliya, Annagu waxaannu nahay dadka oo dhan ugu u naxaan. "
Waxaa jiray dadka in ay jeclaayeen in ay ummad taktay,, la mid ah noo. Paul waxa uu ka hadlayaa dadka Masiixiyiinta ah ee ay ku garanayaa kii dhintay. Markaasaa Bawlos ku yidhi waa haddii Ciise kuma kici, ka dibna waxay ku halligmeen. Waxa ay samaysay. Waxaa jira waara, Ilaah dadka uma.
Oo isna wuxuu ku tagaa xitaa dheeraad ah in la yidhaahdo, waa in aad u nixin Nasaara. Waa in aad dareento xun noo.
Maxaad Ma Waxaan u naxaan?
Haddaba dadka intooda badan, kuwaas oo u malaynayaa in Masiixiyadda sida wax meesha aad kaliya kaniisadda tagaan mararka qaarkood aan kala sooc lahayn, oo waxaa laga yaabaa in aad xasuusato Salaadda Rabbiga, Ma fahmin sababta Paul this dhihi lahaa. Maxaa yeelay, in ay maanka, waxa kaliya ee Masiixiyiintu waa run ahaantii laga badiyay waa Sunday. Laakiin ka dib markii Masiixa sidaas waa ka badan.
Masiix ku baaqay in dhamaan. Wuxuu waydiin wax walba. Wuxuu waydiiyey in aan nolosheena jiifsaday. Si aan kor ugu qaadi our cross. Taas waxaan dhisi nolosheena ku wareegsan. Oo hadduu ma run ahaantii aad u hesho ilaa, waxaan tahay doqon. na Naxariistaha. Maxaa yeelay, waxaan ku sameeyey oo dhan waa nolosheena iska tuurina sabab la'aan.
Haddii Masiix aanu sara kicin, ma jirto nolosha weligeed ah.
Laakiin tan iyo markii uu sara, halkaas waa nolosha weligeed ah!
Waayo, Ilaah dunida jacayl u qabay, ayuu siiyey Wiilkiisa keliya oo uu, in ku alla kii isaga rumaystaa uusan lumin laakiinse uu lahaado nolosha weligeed ah.
Waxaa waa nolosha weligeed ah. Waxaad la soo qaadi karaa. Oo weligiis Ilaah la noolaan. Masiixiyiintu waa in aan u naxaan. Masiixiyiintu waa kuwa rajo ka baxsan qabriga. Maxaad samayn kartaa si nin oo aan dhimasho ha ka cabsanina? Paul waa tusaale weyn of this ee Filiboy 1. Waxa uu ganaax la dhimashada, maxaa yeelay, waxay ka dhigan tahay uu helo si ay u tagaan Ciise la noqon.
Ma waxaad u wadaagaan cabsi la'aan in Paul leedahay? Taasi waxa kaliya oo ka timaadaa mid ka halleeyey xaqiiqada dhabta ah ee dhimashada iyo sarakicidda Ciise.
Isku soo duuboo: Haa. Waxaa muhiim haddii Ciise kacay. Oo isna wuxuu sameeyey kac. Sheekadiisa ay la mid tahay kuwa kale ee in uu dhinto. Qof walba dhinto. Laakiin qof kasta oo aan helo ilaa. Markaasaa Ciise kacay. Oo isna wuxuu ballan qaaday in haddii aynu nahay in isaga aan aad u kici doonaa oo ku qaataan noo daa'in isaga la. Ma waxaad isaga isku halleeyey?
Paul • April 18, 2014 at 11:47 waxaan ahay • Reply
Mahadsanid, Pastor Lee. “Ciise waa kan kii Ilaah soo diray si loo soo celiyo, iyo gaar ahaan in ay na soo celi si aannu wax abuura. Taasi waa warka wanaagsan.” Taasi waa war wanaagsan! qayb confetti The iga qosliyey. Inaad yeelataa dareen gaar ah kaftan marka aad ku wacdiyaan. Waxaa wanaagsan.
Evan • April 18, 2014 at 2:14 pm • Reply
Jacaylka shaqsiyad aad u Masiixiyada marna ku fakarin si qoto dheer si ay diimaha kale inay ogaadaan inaan yihiin kuwa keliya ku odhan kara waxaan leenahay badbaadiye ku dhintay iyo kacay oo nool, uu run ahaantii halkan waa iyo baxeen waqti isku mid ah si ay u tago oo meel diyaariyo noo
CynthiaAghomon • April 18, 2014 at 6:27 pm • Reply
Ciise waa wax walba runtii…waxaa jira Masiixiyada jirin Ciise iyo nolosha aan ku lahaa aan macna lahayn iyo rajo la'aan iskutallaab, dhimashada iyo sarakicidda. Waan ku baryayaaye, wax badan oo indhaha u furnaan doonaa runta ah ee dhacdadan ammaan badan.
Xusuuso: VulcanYouth » Easter!!
JacobAlger • April 20, 2014 at 8:11 pm • Reply
Man Trip, mahad qaybsiga. Tani waa mid ka mid fariin awood leh. Waxaan la Mu'min ah tan iyo markii aan caruur ahaa, laakiin arkay aniga oo waydiinaya su'aal this aad u kaliya Easter this. Your fariin iyo waxbarista Paul ayaa ka dhigaysa in ay si cad. qalbigiinna iyo fariin aan u mahad celineynaa, Barakada aan dude!
Mario A. Ramirez • April 22, 2014 at 4:04 waxaan ahay • Reply
Thanks Bro waqti weyn
Didi • April 22, 2014 at 7:22 waxaan ahay • Reply
ii dambi dhaaf, waayo, iyagoo u gaabiyaa, laakiin is faanin goormaad la badalo magaca on sayidkaygiiyow dhisay inay ku faana? Sidoo kale, gabal heer sare ah on barta of Easter!
TAREKcReSTIK • Laga yaabaa 20, 2014 at 8:27 pm • Reply
waari safarka, Waxaan su'aal ah, whatre fikirkaaga on Kormaridda iyo iidaha kitaabiga ah?
Greg • November 3, 2014 at 7:58 pm • Reply
sidaas shukriya aad qaybsiga Erayga Ilaah waxaan ahay! post Tani waxay si weyn ii dhiiri. Waxay ahayd super adag tahay in la sii Ciise’ guul hore ee maskaxdayda. Waxay ahayd ku dhowaad hal sano ah tan iyo markii aan walaalkiis ka weyn of 17 sano ku dhintay. In flash a Ilaah naftiisa qaaday iyada oo loo marayo waxa u muuqatay shil total in marnaba ka dhacay. Waxaan waqti aad u badan oo isaga la qaatay; noloshayda oo dhan wuxuu u rogmaday jidka ugu weynaa ee abid–waa adag tahay in ay aaminsan yihiin in aan kor u soo socda isagoo ka weyn yahay, isagu weligiis ahaa. anna waan arki doonaa? wuu soo sara kici doonaa?
Waxaan in this post yimid, maxaa yeelay, sidaa darteed waxaan ku dhiirri galiyay aad song “Laasaros.” Waxaad i barakeeyey aad u badan, oo waxaan u leeyihiin in ay aad ugu mahad naqayaa, waayo, wadaagaya runta qoto dheer in, maxaa yeelay, Ciise sara kacay in badiyeen dhimashada, Waan ogahay inaan arki doonaa isaga fool ka fool…iyo Walaalkay aad. Waxaan rajeynayaa in aad sidoo kale lagu dhiirigelinayaa!
Xusuuso: La Familia Sagrada, #CrossEqualsLove | Kween
Sammy • October 15, 2016 at 11:34 waxaan ahay • Reply
sheekadan waa mool dheer in taariikhda oo dhan ku taagnaa xaqiiqda ah in Masiixa ayaa kuwii dhintay ka soo sara kiciyey …
nebiyada oo dhan oo kale waligay ma arag iftiinka maalinta tan iyo markii ay lix feet hoos u ….
500 markhaatiyaal ma aha wax si Qoom iska eafiya iskana … odhan bloke ah sida z Jay ku dhintay iyo saddex maalmood ka dib uu dib u yimid kuwii dhintay ka soo !!!!
washout warbaahinta no weyn noqon lahaa???
laakiin waxa jira fursado ah in 500 pepo markhaati lahaa dhacdadan sida ay biloowday ???
laakiin haddii aan Masiixa la sara kiciyey kuwii dhintay ka soo fikira maalin berrinka maamulka Yuhuudda heli lahaayeen !!!!
lugaha ula noqon lahaa fiican …
ma Masiixiyaddu waxay noqon lahayd diin ugu caayaya in meeraha???
laakiin tan iyo markii aan ognahay sida ay ku dhamaatay sheekadii ku rajayn lahayn in kuwii dhintay in Masiixa la sara kicin doonaa, waana in ka badan news wanaagsan!!
JNote • Laga yaabaa 3, 2017 at 1:07 pm • Reply
nin Trip, Ilaah ha idiin barakeeyo! Dhageysiga khudbadaha iyo waxbaristiisa iyo music, hubaal i qaadaa ilaa. news wanaagsan, Injiil, in wax dadku u baahan yihiin in ay ku noolaadaan dheeraad ah oo inta badan oo ku farxay in ay arkaan aad nin samaynaya Waxaan ahay. Raadinta at jidka Ilaah, waxaa idiin isticmaalaya, i caawisaa badan oo tan iyo markii aan wax badan oo ah alaabtii la mid ah sameeyo, musically iyo shuqulka, sidaas sii leh ay haa tahay in Ilaah binu-aadmiga, Waxaan idiin soo ducayno.